Axmad – Radio Alfurqaan | Xarunta Wararka Sugan
Dhegeystayaasha iyo akhristayaasha ku xiran Mareegta Idaacadda Islaamiga ah ee Al-furqaan, waxay had iyo goor halkan kala socon karaan Wararka iyo Barnaamijyada ay Idaacaddu baahiso. Maanta waa Waa Arbaco Taariiiikhda hijriguna waxay ku…
Dhegeystayaasha iyo akhristayaasha ku xiran Mareegta Idaacadda Islaamiga ah ee Al-furqaan, waxay had iyo goor halkan kala socon karaan Wararka iyo Barnaamijyada ay Idaacaddu baahiso. Maanta waa Arbaco Taariiiikhda hijriguna waxay ku…
Waddanka Mareykanka waxaa laga soo sheegayaa weerar hor leh oo lagu qaaday iskuul ku yaalla gudaha dalkaas, kaas oo lagu dilay in ka badan 20 ruux. Ugu yaraan 21 ruux oo American ah ayaa lagu dilay weerarkaan cusub oo lagu qaaday…
Dhageystayaasha iyo akhristayaasha ku xiran Barta whatsapka idaacadda Alfurqaan waxay had iyo goor halkan kala socon karaan Wararka iyo Barnaamijyada ay Idaacaddu baahiso. Waa Habeennimo Arbaco ah Taariikhda hijriguna waxay ku beegan…
Dhegeystayaasha iyo akhristayaasha ku xiran Mareegta Idaacadda Islaamiga ah ee Al-furqaan, waxay had iyo goor halkan kala socon karaan Wararka iyo Barnaamijyada ay Idaacaddu baahiso. Maanta waa Waa Talaado Taariiiikhda hijriguna waxay ku…
Dhegeystayaasha iyo akhristayaasha ku xiran Mareegta Idaacadda Islaamiga ah ee Al-furqaan, waxay had iyo goor halkan kala socon karaan Wararka iyo Barnaamijyada ay Idaacaddu baahiso. Maanta waa TalaadoTaariiiikhda hijriguna waxay ku…
Dhageystayaasha iyo akhristayaasha ku xiran Barta whatsapka idaacadda Alfurqaan waxay had iyo goor halkan kala socon karaan Wararka iyo Barnaamijyada ay Idaacaddu baahiso. Waa Habeennimo Talaado ah Taariikhda hijriguna waxay ku beegan…
Idaacadda Islaamiga ah ee Al-furqaan waxay idiin soo gudbineysaa barnaami taxane ah oo la yiraahdo dib usoo kabashada Ceelbuur, kadib booqasho aan ku tagnay Degmada ayaa waxaan ka diyaarinay barnaamikan oo ah mid muhiim ah. iminka…
Dhegeystayaasha iyo akhristayaasha ku xiran Mareegta Idaacadda Islaamiga ah ee Al-furqaan, waxay had iyo goor halkan kala socon karaan Wararka iyo Barnaamijyada ay Idaacaddu baahiso. Maanta waa Isniin,Taariiiikhda hijriguna waxay ku…